izindlela ezikhethekile lokulawula traffic njalo ngcono endleleni futhi beba amathuba ngempumelelo ngaphezulu enze umthetho. I bendabuko indlela olandelwayo design usuthathelwa okubizwa ngokuthi uchungechunge izincwadi ngokuthi bazohlawuliswa ezingenziwanga oVikelwe yinoma yimuphi umshayeli. Okungenani, lokhu kusebenza bashayeli abangafuni ukuthobela ungayisebenzisi ihadiwe efanayo yokulwisana ijubane okubhalisa lobuchwepheshe. Kulokhu sicabanga ukutholakala anhlobonhlobo abathengi Silverstone F1 Monaco uhlelo. Izibuyekezo lokhu radar zahlukahlukene, kodwa ngokuvamile, abasebenzisi bayakwazisa izinga lomsebenzi wakhe.
Umklamo idivayisi has a classic Isici sefomu siqala nge imigqa embalwa yokuqala. Kodwa abantu abaningi bayamangala ukucushwa engavamile zedivayisi control. Iqiniso lokuthi uhla eyinhloko imisebenzi ilawulwa iqembu izinkinobho 4 phezu komzimba. Aba cishe wonke amathuluzi ngaphandle kokuvula / ukuvala umsebenzi. Lo myalo sabelwe ukulawula ivolumu. Njengoba for izinga izinto, umtshina radar Silverstone F1 Monaco ungene ngemvume Solid izindlu plastic. Kubukeka okuqinile ngisho nge touch of premium, yize idivayisi iku omelele ikilasi, eduze isabelomali. Ingaphezulu mat plastic, okuyinto enhle ukuze lisebenze, itholakala ku-panel emaphakathi.
I-apharathasi has a emaphaketheni ejwayelekile, njengoba kulindeleke radar ongaphakeme. Enye into ukuthi kungenxa eseduze, abakhiqizi abaningi Chinese ulwela ukuyeka out in a ingxenye ephezulu ezingeni. Kulokhu iqoqo izesekeli liyalingana isimo Silverstone F1 Monaco. Izibuyekezo ngithi ngaphandle ukuthi njengoba idivayisi ephelele. Ngokwesibonelo, kanye radar iza ezimbili nje ukukhiya indlela - I-windscreen futhi panel. Futhi ngokusho abanikazi abaningi, kokubili amadivaysi njengoba latches azibonakali indlela engcono kakhulu. ke Kuyancomeka ukuba esikhundleni iziqobosho yasekuqaleni futhi Velcro nangenxa ingilazi ukufakwa eziqinile. Ngaphezu kwalokho, ikhithi sihlanganisa-USB ikhebula, manual adaptha yamandla. Idivayisi yakhelwe uxhumano ugwayi ukuxegiselwa.
Nalapha futhi, naphezu okuqondene ingxenye imishini ezingabizi, ngesisekelo technical organically ezihlanganiswe umsebenzi wabo ukusebenza nge ezingeni kahle eliphezulu ukusebenza kwe-apharathasi, okuyinto eveza ukubonakala kwakhe. Izibuyekezo Okokuqala ikhasimende mayelana imodeli Silverstone F1 Monaco waphawula neluhla lolubanti lwetinsita umsebenzi nge iningi amaphoyisa omgwaqo ngesivinini okubhalisa. Kodwa hhayi kuphela ukuthi kudingeka siyinake kule yunithi. I nezinye izici nazo abashayeli obuphathekayo:
Inkomba isignali laser - basukela 800 kuya 1100 NM.
Ukubonakala umamukeli - 360 °.
Kushisa bhé kule ndawo uhla K - kusuka 24 050 kuya ku-24 250 MHz.
emisebeni ububanzi X - kusuka 10 475 kuya ku-10 575 MHz.
Isibalo amazinga ukuthola - 3.
Inani kudliwe wamanje - 225 ma.
Ububanzi yokusebenza lokushisa efanelekayo - kusuka -20 70 ° C.
Isisindo - 121 amagremu.
Ngokuya ukusebenza imodeli futhi asikho isizathu tekufakwa ohlwini bangaphandle ingxenye. Idivayisi enikeziwe nge uhlu oluphelele izici ejwayelekile, okuhlanganisa ulwazi esibukweni okukhipha, ukukhanya kanye ivolumu nesaziso izwi t. D. Kusukela umbono ukusebenza kahle, kubalulekile ukwazi, futhi ezihlukahlukene izindlela. Idivayisi isekela usuke othomathikhi nemingcele ukuthi kukhona eliphezulu ukusetshenziswa ezindaweni zasemadolobheni kanye on the track. Kungokufanayo kufanele wanezela futhi ikhono ukuvimbela umuntu yokusebenza amabanga.
ukuthuthukiswa Fundzisisa ephezulu amamodeli we imitshina ngezinye izikhathi ilihumusha kanje ukuhlala lutho emakethe amanye amafoni ephansi ekupheleni, okuyinto by ukusebenza yabo ayikwazi ngisho isondela kakhulu nozakwabo yempucuko. Monaco Onjiniyela wazama ukugwema lokhu futhi ukuqinisekisa umamukeli kuyinto ukusebenza okuyisisekelo hhayi kuphela, kodwa futhi ngamandla ungagcina indinganiso zobuchwepheshe esabekwa imitshina ebizayo yesimanje. Lokhu kufakazelwa ukuba khona GPS-module, futhi ukuvikelwa zakamuva ngokumelene umsakazo ekushayweni izingibe. Ngokwesibonelo, VG-2, irherho aqede ingozi ukuthola Silverstone F1 Monaco. Impendulo ubonisa ukuthi module kwenza umamukeli engabonakali ngoba iningi uzitholele ezikhethekile. Enye into ukuthi amaphoyisa isihambile ukuthuthukiswa kwezinye izifunda, futhi lokhu Ukuvikelwa kwenza format ukungasebenzi kahle. Njengoba ukuze bazivikele ukuphazamiseka ngephutha edolobheni, lokhu ke ngeke ngokuzenzakalelayo Smart ukusebenza imodi owamukelayo. Kulokhu uhlelo ngaphandle umshayeli ilungise umsindo gqwa indlela izimo ezithile traffic futhi ukulungisa abe nozwela umsebenzi radar.
Njengoba kuphawuliwe ngenhla, onjiniyela enikeziwe ezimbili ongakhetha lokukhuphula - kwi windscreen futhi dashboard. Esimweni sokuqala, inhlangano yezingxenye ezintathu loluphelele. Okokuqala, kudingeka bahlanganise ubakaki futhi Velcro, bese ulungise imiklamo ingilazi. Khona-ke ungakwazi udlulele kokufaka Silverstone F1 Monaco. Izibuyekezo ukuncoma ngokushesha futhi anikeze uxhumano ikhebula, noma ukuxhaphaza okwengeziwe break yokuqala isikhundla umamukeli. Inketho sesibili kuhilela nenkanuko edlulele ka Velcro kudeshibhodi. kufanele ahlanze ngaphambi kokuba izifake, hlambulula bese boma ebusweni ukuthi izonikeza elihlangana eziqinile ne Velcro iphaneli enamathela. Nge Velcro ifilimu zokuzivikela isuswe whereupon it eqondiswa ebusweni lelungiselelwe. Khona-ke, ku-Ezansi isakhiwo wazimisela radar. Kuzo zombili lezi zimo, kuyinto efiselekayo ukugwema ukubekwa uphawu kwabangu-serial inombolo imodeli.
Imodeli isebenza ngokufanele ne amasignali amakhamera umile, akwazisa umshayeli kusengaphambili futhi nge izinga eliphakeme lokunemba. Lokhu mode engcono wabonakaliswa futhi izwi uhlelo yenza. Futhi, ngokungafani kuya ekuqaleni ezingeni radar, lokhu apharathasi stably azisa amakhamera stop-band zazo ngokufanele ngesikhathi amarobhothi. Ngokuvamile, le amafushane futhi edolobheni kubonisa umsebenzi owaziwayo kanye ephumelelayo ukuthola - mayelana efanayo okushoyo nokwenzayo ukubuyekezwa. Silverstone F1 Monaco ezimweni ezinjalo akusho ngisho aludingi izilungiselelo ekhethekile band ngayinye Nokho, isimo uyashintsha njengoba siqhubekela phambili kude womgwaqo umatasa. Njengoba i-X futhi K-band, amarekhodi abo uhlelo, kodwa ngesikhathi esifanayo kubonakala futhi uthola izitshengiselo zamanga. Okungenani, kufanele kube ukulungele umsebenzi non-ukufana owamukelayo. Ngaphezu kwalokho, abaningi bathi bambalala pheze ephelele eziyinkimbinkimbi amaphoyisa "CHRIS". Ncika ekubalweni ukufakwa kungaba at ibanga amamitha angaba ngu-400, kodwa lokhu akunakwenzeka ukuba kube ngokwanele ukuba ngokushesha ukushintsha umkhawulo isivinini.
Kungakhathaliseki ukuthi laliyini, kodwa anhlobonhlobo izilungiselelo nxephezela amaphutha umsebenzi olulodwa ngesivinini abalobi. Kufika kulesi sici ancike ezishintshayo abanolwazi imoto abanikazi ngobuchwepheshe esindiswa ngesandla wayinquma spectra ezingadingekile futhi yokukhulisa izitshengiselo. Nokho, ziphawuleka, nokusekela GPS navigation module, lapho ungakwazi pre-ukuhlola izingozi lomhlangano kohlobo oluthile traffic amakhamera. Ergonomics sekukonke nazo kubonakale ihlukanisa radar umtshina Silverstone F1 Monaco. Izibuyekezo kahle agcwele nezilawuli zangaphandle kanye scheme elula imenyu, kanye lesifanele isaziso izwi ngokuhle oyibamba izwi.
Ngokuvamile izimangalo ethulwa ohlelweni obandayo. Ubakaki iqinile futhi uvalwe. Ngakolunye uhlangothi, kukhona kuzuze Mechanics enjalo, ngoba kuqinisekisa ukuthembeka ukufakwa. Kodwa ngakolunye - ezama ngamandla iveni kungaholela ukulimala uqobo kanye yasibamba izinhlelo, futhi umonakalo iwindi iphaneli. Amanothi kulokoza isibonisi, okuyinto ifakwe radar Silverstone F1 Monaco. Amazwana mayelana naleli phutha lingaphansi ezivamile, kodwa izinga langempela le ezinombala ofanayo esibukweni kungenzeka kahle kubonakale njengendlela imvume ukuze amamodeli mncintiswano. Nokho, nezitha emakethe ukukhuluma ngokwehlukana.
Esincintisana esemqoka yalolu imodeli ubhekwa iyunithi X-COP 8500 kusukela Neoline, nakuba unobuthakathaka okuningi. Engingakusho nje uqaphele ezingeni eliphansi umsindo ukungatheleleki ongaphakeme ukuthola ububanzi. Nokho, lezi amaphutha kuthiwa ihlawulelwa elinomlando omude obuhlungu isizinda amaphuzu ukufakwa amakhamera. Enye imodeli ezithakazelisayo zalesi ingxenye Whistler 439ST. Lokhu okuhlukile kuyahluka nokuxhumana avumelanayo GPS navigation module radar izingxenye, okuvumela ngisho ulungise onobuhle zamanje amarobhothi snap-speed. Vele kule umthamo kubonakale phansi kunabaphostoli radar umtshina Silverstone F1 Monaco, okuyinto libuyekeza naye okukhulunywe ngaye esihlokweni lezitshengiselo zamanga ezinengi emihlabathini iphesenti eliphezulu.
Ngokwesilinganiso, kubafuni ingxenye nge price tags kuze kufinyelele ayizinkulungwane 10. Hlikihla. nzima ukuthola umshini ukuhlangabezana zonke izidingo umshayeli yesimanje. Ngisho noma, uma thina umphumela ngokwethu kuphela okufunwa amakhamera amaphoyisa ukuthola endleleni, umbiko ogcwele yonke izingozi kudivayisi eyodwa ngeke. Yiqiniso, lokhu kusebenza ezingeni lamanje nakwezobuchwepheshe amadivayisi engabizi yalolu hlobo. Noma kunjalo, ukusebenza uquqaba ungafaka kuhle high score umamukeli Silverstone F1 Monaco. Ukubuyekeza, ukubuyekeza kanye Ukucaciswa ukhombise usizo le-accessory, ukuthembeka kwalo okuphelele nokulinganisela sokusebenza. Kungokufanayo kufanele wanezela, kanye low price tag, okuyinto ayizinkulungwane 5.5-6. By endleleni, amamodeli ngazo ngenhla kusuka abakhiqizi yokuncintisana ziyatholakala 6-7 THS., Nakuba Izinzuzo ebaluleke phezu radar kusukela Silverstone azikashintshi. Ngaphandle izinzuzo ezithile obusebenzayo ivelele, kodwa ke kubhekwe idetector has trump amakhadi lalo.